Uxinzelelo kwiKhemistry, Physics, nobunjineli
Uxinzelelo luchazwa njengomlinganiselo wendlela esetyenziswayo kwinqanaba leyunithi. Uxinzelelo luvame ukubonakaliswa kwiiyunithi zePascals (Pa), amatsha kwiimitha zesikwele (N / m 2 okanye kg / m 2s), okanye iipounds nganye ngeekhilogram . Ezinye iiyunithi ziquka umoya (i-atm), i-torr, ibhar, kunye namanzi amanzi olwandle (msw).
Ngokulinganisa, uxinzelelo lubonakaliswe ngeteksi enkulu P okanye i-lowercase letter p.
Uxinzelelo luyunithi efunyenweyo, ngokubanzi ibonakaliswe ngokweeyunithi ze-equation:
apho uP ingcinezelo, uF usebenza, kwaye i-A yindawo
Uxinzelelo luyingcipheko ye-scalar. intsingiselo leyo inomlinganiselo, kodwa ayikho isikhokelo. Oku kungabonakala kudideka kuba ngokuqhelekileyo kubonakala ukuba amandla anesiqondiso. Kunokukunceda ukuqwalasela uxinzelelo lwegesi kwibhaluni. Akukho sikhokelo esicacileyo sokuhamba kweengqungquthela kwigesi. Enyanisweni, bahamba kuzo zonke iinkalo ukwenzela ukuba umphumo wenetha uvele ungenangqangi. Ukuba igesi idibene kwibhaluni, uxinzelelo luyafunyanwa njengoko ezinye iamolekyu zidibene nomphezulu kwibhaluni. Kungakhathaliseki ukuba ngaphaya komgangatho ulinganisa uxinzelelo, kuya kuba yinto efanayo.
Ngokuqhelekileyo, uxinzelelo luxabisekileyo. Nangona kunjalo, uxinzelelo olubi lunokwenzeka.
Umzekelo olula woxinzelelo
Umzekelo olula weengcinezelo unokubonakala ngokubamba iqela kwisiqhamo sesithelo. Ukuba ubambe inxalenye ephathekayo yesibhambathiso kwisiqhamo, asiyi kunqumla ubuso. Amandla asasazeka kwindawo enkulu (uxinzelelo oluphantsi).
Ukuba ujika umlenze ukuze umgca ugxininiswe kwisiqhamo, amandla afanayo asetyenziswa ngaphezu kwendawo encinci (ubuninzi bonyxinyiweyo), ngoko ukucima kwendlela lula.
Yintoni i-Enthalpy kwiKhemistry neFiziki?
Amanzi okuHlomelo Inkcazo
I-PH Inkcazo Inkcazo kunye nemizekelo
I-neutron ibhozo Inkcazo kunye nokusetyenziswa
Inkcazo yeAatom yabazali
Ukungahambi kakuhle Inkcazo
Ukuhlanganiswa kwe-United States
"Ibali likaBonnie noClyde"
Imbali epheleleyo yeSwami Vivekananda
Uze ufune ukufumana i-Estados Unidos
Iyini Intsimi Yomnxeba?
Udonsa ifomu leDelphi ngaphandle kweCaction Bar
8 IziGulane zaseJamani kubantwana kunye nabadala
Iilwimi Ukuguqulela 'Ukubuza'
Ngaba Amanzi Amanzi Apholileyo Angakwazi Ukukhawuleza Ngokukhawuleza Kunamanzi Amanzi?
Iincwadi ezilungileyo kunazo zonke zabantwana bamaPagan
IThebula lePeriodic Table of Elements - I-Electronegativity
Imixholo yoBomi beeKhemistry
EN - Kuthetha ntoni i-EN?
Iimpawu zeMpawu zeSynthesis
Ukudlala njani umdlalo weGolfmaker 'Golf
Ngaba uJerry Lee Lewis wayibeka ngokuqinisekileyo iiPianos zakhe kwi-Fire Onstage?
Imfazwe yokuqala ye-Anglo-Afghan
Iinkonzo kunye neNgxowa-mali yeSifundo esiPhezulu kwisiNgesi
Iingcamango zesiTerbia zesiTyhu: iSciare
I-Celery Ukuphosa: I-Chelsea Tradition